Ụbọchị My Pet » Isii Red ọkọlọtọ Iji ntụpọ na mbụ Ụbọchị
Mgbe ọ na-abịa mbụ ụbọchị, e nwere ike oké nrụgide gburugburu ya. Gịnị na-eyi, ebe gaa na ọbụna ihe na-ekwu okwu banyere. Ọ nwere ike na ihe niile na-bit akarị. Otú ọ dị, e nwere ihe ole na ole dị nnọọ mkpa àgwà ị kwesịrị ị na-na-ele anya n'ihi na mbụ ụbọchị. M ekwu okwu banyere atụ ụjọ red ọkọlọtọ ịdọ aka ná ntị ịrịba ama.
Ọ bụ ihe kwere nghọta na-ụjọ na mbụ ụbọchị, otú ahụ ka m m ekwu ị kwesịrị ị na-atụle ọ bụla ikpe na ije gị ụbọchị mere, ma e nwere ihe ole na ole nnukwu ihe Oké mmali na-na-achọgharị.
Ide ozi n'ekwe ntị N'oge Ụbọchị
M na-aghọta anyị bi ugbu a na a technology arọ mmadụ, ma dị tinye ekwentị pụọ. Ide ozi n'ekwe ntị n'oge ụbọchị bụ dị otú ahụ a na-akparị ogbugbu. Ọ dịghị ihe na-eme ka onye na-eche dị na ha dị oke-adịghị ụtọ na-ege ntị karịa texting n'oge gị ụbọchị. Gị akụkụ ka ndị enyi gị nwere ike na-eche a awa ole na ole. Ya mere mgbe i isi maka na mbụ ụbọchị, na-etinye na ekwentị gị na nkịtị na-ahapụ ya ma ọ bụ obere akpa gị n'akpa uwe n'ihi na ndị fọdụrụnụ nke ụbọchị. Ọ bụrụ na ha na-enweghị ike ka ha na ekwentị wezụga na mbụ ụbọchị, karịa yiri dịghị mgbe ha ga-eme ha na ekwentị ala.
Oke egwu mmekọahụ
E nwere ọdịiche dị n'etiti ịbụ flirty na ịbụ mmekọahụ explicated. Ime a ole na ole-emeghị ihe ọjọọ na-ekwu dị mma (dị ka nkenke complementing gị ekike ma ọ bụ ọdịdị), ma ọ bụrụ na ha na-amalite ime ka ndị ọzọ rụrụ arụ na-ekwu, ị kwesịrị ị na ịtụleghachi gị ụbọchị. Onye ọ bụla hụrụ n'anya na-complemented, Otú ọ dị inwe onye sọọ ìsì gị ụkwụ na-agwa gị otú merụsịrị ha na-achọ ime unu n'ebe obibi bụ nnọọ iru ala. Ọ bụrụ na ị na-achọ a ogologo oge mmekọrịta, ị chọrọ a ụbọchị na-agbalị ịmata gị na ọ bụghị naanị lekwasịrị anya na-gị na bed.
Ọ bụ mgbe a mma ịrịba ama ma ọ bụrụ na ụbọchị ka malitere na ọ / ọ na-ama na-akatọ gị. Ihe Nlereanya: ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ okotode mgbatị ahụ ma agwa gị ụbọchị nke a na e nwere omume bụ ihe dị ka "Oh, Ya mere, gị na ụdị a onye. Total mgbatị oke?"Ma ọ bụ mgbe ị na-abata izute gị ụbọchị ha critique ihe ị na-eyi. Ọ bụrụ na ha na-akatọ gị nke a n'oge na, ọ bụ eleghị na ụkpụrụ ga-adịru ga-mgbe niile ịkatọ gị nhọrọ.
Na-ekwu okwu ụzọ nke ukwuu banyere onwe ha
A ezi mkparịta ụka na-emekarị mejupụtara dokwara òkè mgbanwe. E nwekwara ụfọdụ ebe ọ bụrụ na ị ma ọ bụ gị na ụbọchị bụ ihere na-eme, ihe oku n'ime unu abụọ ga na-ebu ihe nke mkparịta ụka, nke dị mma. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ụbọchị bụ n'ụzọ bụ isi a otu kwadoro mkparịta ụka, ebe gị ụbọchị mgbe niile na-akọ banyere onwe ha, ọ na-aghọ a bit na-agwụ ike. Ọbụna njọ, mgbe ha na-ebipụ gị mgbe ị na-ekwu okwu na-ekwurịta ihe banyere onwe ha. A na ụbọchị bụ ohere ịmụ ihe banyere onye ọ bụla ọzọ na-ahụ otú ị jikọọ, bụghị a ohere maka a monologue banyere otú ịtụnanya na nke zuru okè na ị bụ.
Ọrụ na Living Ọnọdụ
Ana m ekwu na ọ bụghị na-a ụbọchị na a onye bi n'ụlọ na-enweghị ọrụ bụ na-akụ na ụba siri ike ụbọchị ndị a, ọ bụ ihe kwere nghọta. Ọ bụrụ na ha adịghị ama a anụ ego ruo ọtụtụ afọ na iyi a obere oke ala ha na ndụ ndokwa ha nne na nna ụlọ, ikekwe ị kwesịrị ị na-akpali. I kwesịkwara na-echegbu onwe ọ bụrụ na ha na-enweghị ike ịgwa gị ihe ị kpọmkwem ha na-eme n'ihi na a ndụ. Gịnị bụ otú zoro ezo banyere ọrụ gị na ị na-enweghị ike ịgwa gị ụbọchị? Ị nwere ike ọ gaghị na-achọ ịma azịza…
Ezie na onye a nwere ike iyi ihe doro anya (dị ka ndị mbụ ụbọchị bụ mgbe a oké oge atụle gara aga mmekọrịta), ma ọ bụrụ na ha na-eme ha bụbu, ntị otú ha na-ekwu banyere ha. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ha dị nnọọ nkenke banyere ha, ma ọ bụrụ na ha na-agwa gị ihe a emetụta akparamàgwà mmadụ ha bụ ndị na otú ihe ha kpọrọ ha asị, n'ezie na ị na-ekwesịghị atụmatụ a abụọ ụbọchị. Ọ bụla ụdị ike ike ma ọ bụ ndisụhọrede okwu banyere ha n'oge gara aga mmekọ na-egosi na ha n'ụzọ doro anya na ọ dịghị akpali si na mmekọrịta ma ọ bụ na ha bụ ndị dị nnọọ ilu ma na-obi ọjọọ, nke ikpe na ọ bụ ihe kasị mma ị na-adịghị anọgide na-ahụ ka ha na.